Oovimba beDola yase-Australia-Funda ukuRhweba
tag: Dollar yaseAustralia
I-Aussie iphinda ibe namandla phakathi kokunciphisa i-GDP elandela i-Shaky Dollar
I-Aussie yanyuswa ngcono-kunokuba-ilindelwe Amanani eGDP. Nangona kunjalo, naziphi na iindaba kwi-Omicron zinokuphinda zivuselele ukungazinzi. I-GDP yase-Australia ifunyenwe yi--1.9% QoQ kwikota yesithathu, ingcono kunokuba ilindelwe ngu -2.7% QoQ. Enyakeni, i-GDP ikhule nge-3.9%. Iimarike zesitokhwe zehlabathi zibuyela kancinci kancinci namhlanje, kunye neenkxalabo malunga ne-Omicron esele izinzile okwangoku. Kurhwebo oludityanisiweyo kuluhlu oluqinileyo, izibini ezinkulu zemali nazo zibophelelekile.
UShawn Crick, iBambela leNtloko yee-Akhawunti zeSizwe kwa-ABS, uthe: Imfuno yasekhaya ikhokelele ekwehleni ngokuvalwa kwexesha elide e-NSW, eVictoria, naseMazantsi eWales, okubangele ukuthotywa okukhulu kwenkcitho yekhaya. I-GDP ngekota kaSeptemba ka-2021 yayiyipesenti eyi-0.2 ngaphantsi kwenqanaba lobhubhane ngoDisemba ka-2019.
Inkcazo yokuvelisa yase-Australia ye-AiG yenyuka nge-4.4 pp ngoNovemba. ukuya kuthi ga kwi-54.8 amanqaku. Ukujonga ezinye iinkcukacha, ukuveliswa kwemveliso ku-4.7 ukuya kwi-52.5. Ingqesho inyuke nge-2.0 ukuya kwi-50.0. Ii-odolo ezitsha zenyuka nge-1.0 ukuya kwi-59.3. Izibonelelo ezinikwa ababoneleli zinyukile ukusuka kwi-12.2 ukuya kwi-53.4. Amaxabiso ezinto ezikrwada awile ukusuka kwi--3.5 ukuya kwi-78.3. Ixabiso lokuthengisa linyuke nge-4.2 ukuya kwi-68.1. Umyinge womvuzo wehla ukusuka kwi--1.3 ukuya kwi-62.4.
I-Aussie yawa isuka Phezulu njengeDollar Pullback kwiMood yeMarike
Ngexesha leseshoni yaseMelika, i-Aussie yafumana ezinye zeelahleko zangoLwesibini, zenyuka ngeepesenti ze-0.30. Iimali ezijongana nomngcipheko njenge-AUD, i-NZD, kunye ne-CAD zixhamla kwiimvakalelo ezintle zentengiso kwiimarike zezimali. Kwakhona, emva kobunzima obahlukeneyo be-Omicron COVID-19 kunye nezimvo ze-hawkish ezivela kuSihlalo we-Fed uJerome Powell ephembelele uluvo lwentengiso ngoLwesibini, i-indices zaseMelika ziyenyuka.
Kwimeko yezoqoqosho e-United States, i-US ADP Employment Change ngoNovemba ibonise ukuba ii-payrolls zangasese zanda nge-534K, zidlula ukulindela kweengcali ze-525K. Okwangoku, i-ISM Manufacturing PMI e-United States yanda ukuya kwi-61.1, ishumi ngaphezu kwe-61.0 izibikezelo. "Icandelo lezemveliso lase-US lihlala likwimeko eqhutywa yimfuno, enyanzelwa yinkqubo yokubonelela ngempahla, kunye nezalathiso ezingephi zabasebenzi kunye nokuphuculwa kokuhanjiswa kwabaxhasi." utsho uTimothy Fiore, usihlalo wekomiti yovavanyo ye-ISM.
tags Dollar yaseAustralia, IDOLI
I-AUD yehla ngokukhawuleza njengeYen Surges, ngasemva kweNgcaciso yeDatha yaseTshayina
Ukuhlaziywa: 16 Agasti 2021
Ngokuvalwa kwe-Australia kusandiswa, i-AUD ihlala ibuthathaka. Njengoko inani lamatyala liqhubeka nokunyuka, iSydney, iMelbourne, iCanberra kunye neDarwin zihlala ziphantsi kwemida engqongqo. I-Australia isemngciphekweni wefom ye-Delta echaphazeleka kakhulu kuba i-26% yabantu abangaphezulu kweminyaka eyi-16 bagonywe ngokufanelekileyo. Namhlanje ibilelona gazi ligazi lokuqhambuka kwe-COVID-19 eSydney, esona sixeko sikhulu e-Australia. Ukuthintela ukuhamba kwabantu, amajoni namapolisa akha imiqobo. Umda wase-Australia uphakathi kwezona zinto zibambekayo emhlabeni, izohlwayo eziqatha kakhulu zokwaphula imigaqo yokutshixwa.
I-AUD ikwachaphazeleka kukudodobala koqoqosho lwaseTshayina, ngokweedatha. Intengiso ethengiswa rhoqo ngonyaka ngoJulayi e-China yayiyi-8.5 yeepesenti, xa kuthelekiswa neepesenti ze-11.5 eziqikelelweyo, kwaye imveliso yonyaka yoshishino yayiyi-6.4 yeepesenti, xa kuthelekiswa neepesenti ze-7.8 ezilindelweyo.
Ibhanki enguVimba yase-Australia (i-RBA) kulindeleke ukuba ibe yindumasi ngakumbi (imizuzu eya kwintlanganiso yayo yokugqibela iya kukhutshwa ngoLwesibini). I-Reserve Bank yaseNew Zealand (i-RBNZ), kwelinye icala, iseyeyona bhanki iphambili ye-hawkish kwaye kulindeleke ukuba inyuse inzala okokuqala ukusukela ngo-2014 ngoLwesithathu.
I-yen inyuke kabukhali ngenxa yezinto ezinobungozi, zonke ezo zibotshelelwe kubhubhane. Njengoko i-coronavirus iphinda yavela, ukubulawa kwedatha ebuthathaka kunokuba bekulindelwe evela e-China kubonise ukuba ukubuyisela kwakhona kuphulukana nomphunga. Usulelo lonyukile eJapan, kwaye i-Australia inyanzelise imiqobo. Iimali zezinto zorhwebo ziyehla ngokubanzi, ngedola yase-Australia iyeyona ibetha kakhulu. Iimali ezinkulu zaseYurophu okwangoku zixutywe kodwa zihlala zomelele ngokuchasene nedola yaseMelika okwangoku.
I-AUD yehla ngokuthe ngqo kwiYen
Iqela lezinto ezinobungozi zibangele ukuba i-AUDJPY nayo iwe ngamandla namhlanje. Imida enzima kukwanda okwahlukileyo kweDelta kubangela inkxalabo e-Australia. Usulelo lufikelele kwinqanaba elitsha eNew South Wales, ngelixa iMelbourne ibuyisele ixesha lokufika ebusuku. Ukutshixwa kwe-Australia Capital Territory kuye kwandiswa kwezinye iiveki ezimbini. Ummandla waseMantla ngokufanayo uphantsi kokutshixwa kweentsuku ezintathu.
Isibini se-AUD / i-USD saya kwisiqalo kwiveki entsha, saya kumgangatho ophantsi we-0.7331 ngaphambi kokudityaniswa. Njengoku kubhalwa, isibini sasirhweba nge-0.7340, phantsi kweepesenti ze-0.4 ngosuku. I-Index yeedola yaseMelika, kwelinye icala, eye yehla kakhulu ngolwesiHlanu phakathi kokuwa kwesivuno senqaku laseMelika laseMelika, ithengiswa kuluhlu olomeleleyo ngaphezulu kwe-92.50 ngoMvulo, ivumela ixabiso le-AUD ukuyalela i-AUD / USD swings.
Intengiso ethengisa e-China inyuke nge-8.5 yeepesenti ngonyaka kunyaka kaJulayi, ngokwamanani akhutshwe kwangoko ngemini. Ngomda omkhulu, le datha yehlile kwimvumelwano yentengiso yokunyuka kwepesenti ye-11.5. Ngaphaya koko, ukuveliswa kwemizi-mveliso kunyuke nge-6.4 yepesenti kwangelo xesha linye, xa kuthelekiswa nokulindelwe ziingcali nge-7.8%. Ummeli wase-China u-AUD ubethwe kakhulu ngala manani asokolayo ekuqaleni kweveki.
tags Aud, Aud / JPY, Aud / USD, Dollar yaseAustralia
Iphawundi, iDollar Ithathwe njengeDola yaseAustralia ibanjwe iQinisekile phambi kweNgxelo yeRBA
Kuba i-United States kunye ne-United Kingdom bobabini bakwiholide, urhwebo beluthe cwaka. Iponti ibuthathaka kancinci, ilandelwa yidola kunye nefranc yaseSwitzerland. Idola lase-Australia kwelinye icala lenyuka kancinci phambi kwengxelo yereyithi yeRBA kwiseshoni yaseAsia.
Ibhanki esembindini ayinakulitshintsha isikhokelo sayo sangaphambili, esichaza ukuba ezona mfuno ziphambili zokunyuka kwamaxabiso azizukufikelelwa de kube ngu-2024 kwangoko. Nangona kunjalo, i-Aussie inokubanjiswa yibhombu ye-hawkish.
Ngokumalunga nohlalutyo lobuchwephesha, inkxaso ye-0.7673 kwifayile ye- Aud / USD Isibini siya kuba yinto ephambili kwiseshoni ezayo. Abahlalutyi baqikelela kwangaphambili ukusuka kwi-0.7530 ukuqala kwangoko okanye mva nje ukuba le nkxaso iyaqhubeka.
Ukuba ukuxhathisa kwe-0.7890 kwaphuliwe, eyona nto iphambili yokuthenga kufuneka iqiniswe, ivumela uvavanyo lwe-0.8004 ephezulu. Ukuba oko kuyadlula, kuya kufuneka kuxhaswe kukophulwa kwe-1.5723 yenkxaso encinci kwi-EUR / AUD, eya kuthi ikhokelele ekuweni kwakhona ukuya kumgangatho we-1.5418.
Ulawulo lweRBA lunokuhlala lungaguqukanga
IBloomberg iqikelela ukuba iBhanki enguVimba yase-Australia (i-RBA) iya kuyigcina imigaqo-nkqubo yayo ingatshintshi kwintlanganiso yomgaqo-nkqubo wezemali ngoLwesibini. “Ibhanki enguVimba kungenzeka ukuba ibambe iingxoxo zokuqala malunga nokuba yongezwe na into ekujoliswe kuyo yeminyaka emithathu kwaye yenze nolula ngakumbi,” inqaku lohlalutyo longeziwe.
IBloomberg yongeza ukuba "Amandla edatha yoqoqosho yakutshanje ichaza ukuba ibhanki engundoqo inokukhetha ukungasiqali isivuno sayo ekujolise kuso ngoNovemba 2024 ukusukela ngo-Epreli 2024 kunye nokuthenga okuncinci phantsi kwenkqubo yayo yokuthenga ixesha elide," icaphula ubalo lwebhanki ephambili kuqoqosho lwamva nje.
Ingxelo ikwakhankanya umngcipheko kwi-RBA yethemba elikhuselweyo lakutshanje, isithi, "Ukuzibophelela kule meko imbi kukugcina isimbo nakuphi na ukunyuka kwemali, ngakumbi ukuba ezinye iibhanki eziphambili ziyahamba."
tags Dollar yaseAustralia, IDOLI, IPELA
I-Dollar yase-Australia izuza ukomelela njengoko i-Euro ihleli ikhutshiwe emva kwe-ECB Rally
I-rally ekhawulezayo kumaxabiso e-iron ore ityhala i-Australia xa iyonke namhlanje phakathi komngcipheko wokutya. Idola yase-Australia okwangoku yeyona inamandla kule veki, ilandelwa yidola yaseNew Zealand, ngelixa idola laseCanada lisondele ngasemva kumaxabiso eoyile.
I-Sterling ihlala iyeyona imbi kakhulu ngenxa ye- “Amathuba aphezulu” ye-non-deal Brexit, ekwanceda ukuxhasa i-franc yaseSwitzerland ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile. Idola okwangoku yeyesibini kubuthathaka kule veki, inikwe ukwanda kwamabango angasebenziyo kunye nokuqina kwenkqubo entsha yezemali.
Idola yase-Australia inyuke kakhulu namhlanje kwaye iyazodlula ezinye iimali zorhwebo. Ukunyuka kwamaxabiso esinyithi kubonwa njengamandla okuqhuba. Isinyithi sangena kwirali yokulinganisa emva kokuba iZibuko lePilbara, eyona ndawo inkulu yokuthumela ngaphandle intsimbi, ikhuphe isilumkiso senkanyamba, isandisa imarike esele inexesha.
Ukuhlala kwe-Euro kuKhuselwe emva kweRally ye-ECB
I-ECB ibibambe intlanganiso yomgaqo-nkqubo wayo wokugqibela ngoLwesine kwaye le ntlanganiso ibonwabile. Ibhanki esembindini inyuse inkqubo yokuThengwa okungxamisekileyo kwePandemic (PEPP) ngama-500 ezigidi zeerandi, ukuya kwi-1.85 yezigidi zeerandi. I-PEPP, esona sixhobo siphambili se-ECB kumlo wokulwa nesifo sikaCovid, sandisiwe ngeenyanga ezilithoba kude kube ngoMatshi 2021.
Ngaphandle koko, ibhanki esembindini yandise iMisebenzi yokuSebenza yeXesha eliXhasiweyo (i-TLTRO) ngonyaka omnye de kube nguJuni 2022. Esi sikimu siyilelwe ukukhuthaza ukubolekwa kweebhanki kuqoqosho.
Ngokobuchwephesha i-euro iya kuba nomdla njenge-rally emva kokuba i-ECB ingabinamandla angaphezulu. I-EUR / USD isezantsi kancinci kwiseshoni yangoLwesihlanu. Isibini se-EUR / USD sithengisa ngoku kwi-1.2113, yehla nge-0.19% ngaphezulu kosuku. I-EUR / USD idibana nokumelana kwi-1.2175. Ukuxhathisa okusondeleyo ku-1.2209.
tags Dollar yaseAustralia, Euro
Ireyithi yeRBA yokuCutha inyusa iDola yaseAustralia njengeXabiso leoyile elingenakho ukuxhasa iDola yaseCanada
Ukuhlaziywa: 3 Novemba 2020
Iimakethi zibuyela umva namhlanje emva kokuvalwa okuqinileyo kwe-US kusuku olungaphambili. Idola yaseCanada yenze umva, ayixhaswanga ngamaxabiso eoyile. Idola yase-Australia iphakanyisiwe namhlanje kulandela iindaba zokuncitshiswa kwereyithi yeRBA. Nangona kunjalo, icala elingaphantsi linomda, gcina ezimbalwa.
Idola yaxutywa, kunye ne yen kunye neemali ezinkulu zaseYurophu. I-franc yaseSwitzerland ibonakala iqhubekile nefuthe layo lokunyusa ngokuchasene ne-euro kwaye yomeleze ngokubanzi. Ngokubanzi, iimarike azifani, kugxilwe kwiziphumo zonyulo lwase-US.
Njengoko bekulindelekile, kwintlanganiso yanamhlanje i-RBA ibhengeze ukongezwa komgaqo-lawulo wemali. I-RBA isike inzala yayo ukuya kwi-0.1% ukusuka kwi-0.25% ngaphambili. Ngokunjalo, ithagethi yesivuno kwiibhondi zikarhulumente ezineminyaka emi-3 kunye nenqanaba lenzala kwiimali ezitsha ezinyuswe phantsi kwesibonelelo esingxamisekileyo sezemali sancitshiswa saya kwi-0.1%.
Ngeli xesha, ibhanki esembindini iyathobile inzala kwiibhalansi zokuhlala (iAustralia ilingana nexabiso lemali yenzala yase-US koovimba abagqithisileyo) ukuya ku-0. iminyaka ubudala. Kwiinyanga ezi-100 ezizayo, emva koko uhlalutye isidingo sokuthenga okongeziweyo "Ngokujonga imeko eguqukayo yemisebenzi kunye nokunyuka kwamaxabiso".
Ngokwemigaqo yomgaqo-lawulo wemali, ibhanki engundoqo iphindaphinde umgaqo wokuba "Ibhodi ayilindelanga ukuba ireyithi yemali inyuke iminyaka emithathu ubuncinci." Abenzi bomgaqo-nkqubo bakwacebise ukuba ubungakanani benkqubo yokwehlisa inani iyaqwalaselwa kwaye ixhomekeke kumathemba engqesho kunye nokunyuka kwamaxabiso. Baye bathembisa ukuba “Yenza okungakumbi xa kukho imfuneko yoko.”
Kuba i-RBA igwebe inzala emibi, silindele ukuba yenze njalo ngenqanaba elisikiweyo kule nyanga. Ngelixa amaqondo omgaqo-nkqubo kwinqanaba langoku liza kuhlala lingatshintshi kule minyaka izayo, ibhanki engundoqo iya kugxila ekunciphiseni ubungakanani bokubakho kwimeko apho ukongezwa okuthe kratya kuyafuneka kwixa elizayo.
I-AUD / i-CAD ibuyisa njenge-AUD / NZD eqinileyo emva kweRBA Sika
I-Aussie ithengisa ngokubanzi ukurhweba ngaphezulu emva kokukhutshwa kweRBA komyinge osikiweyo, kubandakanya nezinye iimali zorhwebo. Ukubuyela kwi-AUD / CAD yenye yezona zinto zibonakalayo. Isaphulelo esivela kwi-0.9297 somelele kancinci kunokuba bekulindelwe.
Nangona kunjalo, umnqamlezo ubambe kamnandi ngaphaya komyinge oshukumayo onyukayo, ogcina uqikelelo lwexesha elifutshane lwonyuko. Ukuwa okulungisayo ukusuka kwi-0.9696 kufuneka kuqhubeke kwakhona kungekudala okanye kamva, okoko ukubanjwa kwe-0.9433 kubanjiwe. Ikhefu le-0.9247 liya kujolisa ekubuyiseni i-38.2% ukusuka kwi-0.8066 ukuya kwi-0.9696 kwi-0.9073.
tags Dollar yaseAustralia, ICAD yaseCanada, Ibhanki ye-Reserve ye-Australia (RBA), Unyulo lwaseMelika
I-Dola yase-Australia yaseDwindles kwiCandelo leRBA elilindelweyo lokuCuthwa, umngcipheko kwi-Bias Softens
Ukuhlaziywa: 15 October 2020
Idola yase-Australia iwele ngokubanzi namhlanje emva kokuba i-RBA icacise ukongezwa kwemali kwinyanga ezayo. Oku kukonyuselwa yidatha yemisebenzi engaqondakaliyo kunye nesimo sengqondo esibuthathaka kumngcipheko. Ngoku kujongeka ngathi abaqulunqi bomgaqo-nkqubo base-US abanakuvuma isivumelwano esitsha sokunyusa ngaphambi kokhetho.
Izitokhwe zase-US ziye zasokola ukophula irekhodi ngelixa iimarike zaseAsia nazo zibuthathaka. Namhlanje i-euro yomelele, ilandelwa yi-Swiss franc. Kwiveki, i-yen kunye nedola ngoku zezona zinamandla, ngelixa i-Australia kunye ne-euro zibuthathaka.
Ngokobuchwephesha, i-Aussie iqala ukubonakala isengozini njengoko i-AUD / CAD ibonakala ngathi iyaphule inkxaso eyi-0.9409. Oku kuyakuqinisekisa ukuqala kokulungiswa kokukhula ukusuka kwi-0.8066 ukuya kwi-0.9696 kujoliswe ekuvuseleleni i-38.2%.
Emva kokungazinzi okungalindelekanga, i-AUD / NZD kufuneka iphinde iqhubeke nokulungisa ukuwa ukusuka kwi-1.1043 ukuya kwi-1.0565 yenkxaso. Inkxaso kwi-0.7095 kwi-AUD / USD iya kubonakala ukuqinisekisa ukubuya kwithuba elifutshane le-bearish. Kodwa inqanaba elikhulu iya kuba kukuchasana kwi-1.6586 kwi-EUR / AUD.
I-RBA Lowe icebisa ngeRhafu yokuSika ngoNovemba
Irhuluneli yeRBA uPhilip Lowe uthethe wancama kwintetho yakhe ukuba ibhanki enkulu ikulungele ukuphucula umgaqo-nkqubo wezemali kwintlanganiso ezayo ngo-Novemba. Uyiphawule lonto “Njengokuba uqoqosho luvuleka, kusengqiqweni ukulindela ukuba ukuncipha kwemali kuya kufumana inkxaso ethe xhaxhe kunangaphambili.”
U-Lowe ukwaphawule ukuba kuqatshelwe uzinzo kwezemali “Nditshintshile noko.” Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba ukunciphisa imali kuncede abantu bafumane imisebenzi, kuyakunceda ukuphucula amaqweqwe abucala kunye nokunciphisa iingxaki kwimali mboleko. Ngale ndlela, umngcipheko kuzinzo lwezezimali unokuncitshiswa. "
Amagqabantshintshi kaLowe ahambelana nolindelo lwentengiso kwelinye inqanaba lemali elihliswe laya kwi-0.10%, ngokunyuka kwempahla yokuthengwa kweeasethi ngaphezulu kwexesha elide.
tags Aud / NZD, Aud / USD, Dollar yaseAustralia, Urhuluneli weRBA uPhilip Lowe
Ukutyhalwa kweDola kufuna ukomelela ngakumbi njengoko iAussie ibuthathaka
Ukuhlaziywa: 27 Septemba 2020
Isibini se-AUD / USD sihamba sijikeleza i-0.7030 / 35 kwiveki ephelileyo yorhwebo. NgoLwesihlanu, isibini saseOstreliya sehla saya kweyona iphantsi ukusukela nge-20 kaJulayi kwaye senyuka saya kwi-0.7004 ngeveki. Ngelixa iinkxalabo ze-coronavirus (i-COVID-19) kunye ne-rally ebanzi kwi-dollar yase-US inokubekwa ityala ngobuthathaka besicatshulwa, imiqondiso elungileyo yamva nje ngokubhekisele kwiphakheji yoncedo yase-US kunye neyeza lokugonya kwintsholongwane ekukhanyeni ekupheleni kwetonela. Nangona kunjalo, bakwinqanaba labo lokuqala kwaye bafuna ukhuphelo ukuze basebenze.
Idola kunye ne yen ziye zagqitywa kwiveki ephelileyo njengeyona yomeleleyo ngasemva kokuwa kweemarike zokulingana zehlabathi. Kwakukho inkxalabo malunga nokuvela kwakhona kosulelo lwe-coronavirus eYurophu, kunye neenkxalabo malunga nokubuyela ekuhlukanisweni. Nangona kunjalo, emva kokuphuma kwangolwesiHlanu, iimarike zaseMelika azigqibanga kakubi. Akukacaci ukuba imeko yomngcipheko iyatshintsha na. Sithathela ingqalelo ukukhula kwedola, nangona yomelele, ukuza kuthi ga ngoku akukho nto ngaphandle kokulungiswa.
Kwelinye icala, i-Australia ne-New Zealand dollar yaphela ibuthathaka kulindelo lomgaqo-nkqubo owenziwa lula ziibhanki eziphambili. Nangona kunjalo, abathengisi baseOstreliya abakakulungeli ngokupheleleyo. Izimvo zahlulwe malunga nokuba i-RBA izakulinciphisa na inani lenzala kwisithuba esingaphantsi kweeveki ezimbini. Iintsuku ezizayo ziya kuba nomdla kwidola yase-Australia.
Ukulungiswa kwesalathiso sedola kungaseta
Isalathiso sedola ekugqibeleni saqhekeza ukuxhathisa kwi-93.66 kwiveki ephelileyo, eqinisekisa ukubotshwa kwi-91.74. Enye i-rally kwixa elizayo izakuhlala ithanda indawo ye-95.71 yokumelana neqela kunye ne-38.25 yokutsala ukusuka kwi-102.99 ukuya kwi-91.74 kwi-96.03. Okwangoku, sijonga ukukhula kwangoku njengentshukumo yokulungisa. Yiyo loo nto, ukuxhathisa okuqinileyo kunokubonwa ukusuka kwi-95.71 / 96.03 yokunciphisa umda kumandla aphezulu kwaye kukhokelele kwelinye ixesha eliphakathi ukuya kwi-91.74.
Ke ngoko, akunakulindeleka ukuba kweli nqanaba idola ibone uzinzo oluzinzileyo ngenxa yomngcipheko wokuthintela. Ngenxa yokunqongophala kwazo naziphi na izinto ezakhayo ezinokuvuselela amathemba okuphulukana noqoqosho phakathi kwesifo sentsholongwane kunye nokungqubana phakathi kwe-US ne China, isibini se-AUD / USD akunakulindeleka ukuba sihlale somelele ixesha elide. Nangona kunjalo, akukho datha / ziganeko zibalulekileyo kwikhalenda ezinokugcina abathengisi beqikelela ukuba ezinye iingcebiso zeendaba azibonisi zimpawu zintle.
tags Dollar yaseAustralia, ICoronavirus (COVID-19), KwiDola yaseMelika, Isalathiso seDollar yaseMelika
Idola yaseOstreliya iyehla kwi-GDP yehla njengoko iDola yandisa ukuLungiswa kwakhona
Ukuhlaziywa: 2 Septemba 2020
Idola yase-Australia yehla kakhulu namhlanje kwaye ithengisa njengoyena ubuthathaka ukuza kuthi ga ngoku. Ukwehla kwakulandela emva kwedatha ye-Q2 ye-GXNUMX embi kakhulu kwaye kulindelekile ngenxa yokuthatha inzuzo kuhlumo olomeleleyo lwamva nje. Ukuthengisa ngokuchasene nedola yaseNew Zealand, eyokugqibela yeyona inamandla. Kwelinye icala, idola ikwabuyela kwimeko yesiqhelo xa iyonke, yetyisa ilahleko ebukhali yakutshanje. Abarhwebi babelumke nangaphambi kwedatha ebaluleke ngakumbi evela e-US, kubandakanya idatha yecandelo labucala le-ADP namhlanje, iinkonzo ze-ISM ngomso, kunye nedatha yengqesho engeyiyo eyasefama ngolwesiHlanu.
Idola lihlala lizinzile ngokubanzi kwiseshoni yase-US njengoko ukulungiswa kokulungiswa kuqhubeka. Abahwebi abayikhathaleli idatha yedatha yomsebenzi ebuthathaka kunaleyo ilindelweyo. Izabelo ze-US ziya kuvula phezulu njengoko i-S & P 500 kunye ne-NASDAQ inyuka ukurekhoda phezulu. Idola yase-Australia okwangoku ibuthathaka kwaye iyaqhubeka nokulungisa emva kokuphoxeka kwe-GDP. Kwindawo yesibini ngokobuthathaka yi-euro, ilandelwa yiponti entle.
Ngokobuchwephesha, ukuya kuthi ga kwidola, ukubuyiswa kwangoku ngoku kubonwa njengokuhamba ngokulungisa. Ubuncinci bokuqhekeka kwe-0.9161 ukumelana ne-USD / CHF, ukumelana ne-1.1325 kwe-USD / CAD, kunye nenkxaso ye-1.1762 ye-EUR / USD iyafuneka ukuze ibeyimiqondiso yokuqala yezantsi yexesha elifutshane. Ukuphambuka kwe-EUR / CAD ukusuka ku-1.5646 ukuxhathisa kunika idola ithuba elincinci ngokuchasene ne-euro. Siza kubona ukuba i-EUR / CAD iyaphula inqanaba le-1.5469 ukuze iphinde iqhubeke nokulungiswa kokuhla ukusuka kwi-1.5978.
I-GDP yase-Australia inqatshelwe kwiRekhodi -7.0% kwiQ2
I-GDP yase-Australia kwikota yesibini enikwe ikhontrakthi ngo -7.0% QoQ, embi ngaphezu kokuba bekulindelekile -6.0% QoQ. Oku kokona kwehla kwekota kunako ukurekhodwa ukusukela ngo-1959. Idityaniswe nokwehla kweQoQ nge-0.3% kwikota, ukudodobala koqoqosho kwezobugcisa kuyaqinisekiswa. Xa sijonga ezinye zeenkcukacha, singatsho ukuba ibango labucala liyinciphisile i-GDP nge -7.9%, ekhokelele ekunciphiseni kwenkcitho yokugqibela yamakhaya nge -12.1%. Iindleko zeenkonzo nazo zehle nge-17.6%. Isabelo sentengiso kwi-GDP yayiyi-1.0%. Imfuno zikarhulumente yayiyi-0.6%.
Emva kopapasho, uNondyebo uJosh Friedenberg wathi: “Iiakhawunti zikazwelonke zanamhlanje ziqinisekisa ifuthe elibi le-COVID-19 kuqoqosho lwase-Australia… Iminyaka engama-28 yokukhula koqoqosho ifikelele esiphelweni ngokusemthethweni. Unobangela? Ubhubhane owenzeka kanye kwinkulungwane. "
kunjalo, "Ukusebenza kwezoqoqosho e-Australia yenye yezona zinto zibalaseleyo kula mazwe aphuhlileyo ngenxa yempilo kunye nesicwangciso sethu soqoqosho sokulwa intsholongwane," wongezelela. "Ukugcina ubomi nokuqinisekisa ukuba inkqubo yezempilo yase-Australia iyakwazi ukuvavanya, ukulandelela, nokunyanga iimeko ze-coronavirus ibe kwaye iya kuhlala iphambili kuthi."
tags Dollar yaseAustralia, Imveliso Yomhlaba Yonyango (GDP), KwiDola yaseMelika
I-AUD, i-NZD yokubuyisa ukubuyiswa emva koTshayina oPhezulu aBonakalise ukuCinga ngethemba phakathi kweNtetho eziQhelekileyo zoRhwebo
Ukuhlaziywa: 21 Novemba 2019
Zininzi izinto ebezithelekisiwe malunga neencoko zorhwebo eziqhubekayo phakathi kweMelika ne China. Amaxhala aphakama xa i-US yapasisa umthetho oyilwayo wokuxhasa amalungelo oluntu eHong Kong ngelixa yayidlulisa umthetho-mali wesibini wokumisa ukuthunyelwa kweembumbulu ezithile kumapolisa aseHong Kong. Le ntshukumo ayikhange yehle kakuhle ne-China ekhuphe isilumkiso e-US ukuba iyeke imicimbi yayo.
Uluvo lwe-Bearish lubambe imarike xa iingxelo zihluzwa kwinto yokuba iingxoxo zorhwebo phakathi kwala mazwe mabini oqoqosho olukhulu ziye zafikelela kwisithintelo. Oku kuncitshisiwe ukwala kukaMongameli uTrump ukususa iirhafu ezithile kwimpahla yaseTshayina ngelixa esoyikisa ukonyuka kweerhafu kwimeko yesivumelwano esingaphumelelanga. Ubungakanani bemveliso yezolimo yase-United States ethengwe yi-china ikwabangele inkxalabo.
Abatyalomali babengaqinisekanga ukuba isivumelwano sokuqala singasayinwa nini; Iingxelo eziqokelelwe kwimithombo yangaphakathi kwindlu emhlophe zathi zingahanjiselwa kunyaka olandelayo kuba i-China ifuna ukuqinisekiswa ngokususwa kweerhafu. Impapasho nangona kunjalo icaphula imithombo ekufutshane nendlu emhlophe ixele ukuba iingxoxo zorhwebo zifikelele kwinqanaba.
Ithemba liphinde lakhanyiswa xa kudliwanondlebe neBloomberg, I-Nkulumbuso yase-China ibonakalise ithemba phakathi kokulumka malunga neencoko eziqhubekayo zorhwebo phakathi kwala mazwe mabini. Kodwa ke, wongeze ukuba ezinye izinto ezingaqondakaliyo zigubungele iimfuno zaseMelika.
Ekuvukeni kweendaba, i-Australia kunye ne-New Zealand yedola xa kuthelekiswa ne-USD ngababini baqala ukubuyela kwimeko yesiqhelo. Ngexesha lale ngxelo, i-AUD xa ithelekiswa ne-USD ibimi kwi-0, ifunyenwe kwixabiso eliphantsi le-6798 .0 yokuma kwi -6786%. I-NZD xa ithelekiswa ne-USD ithengiswe nge-0.05 .0 ukuhla ngaphezulu ukusuka kwixabiso eliphantsi le-6413 ngelixa ime-0.6397%.
NgoLwesithathu, iimvakalelo ze-bearish zazibambe i-AUD, i-NZD / i-USD ngababini ngaphezulu kwegridi yeentetho zorhwebo. Umkhwa uqhubeke kwangoko ngoLwesine kwaye wema kancinci njengoko omabini la mabini ebambe uzinzo xa uxinzelelo malunga nesivumelwano sentengiso lubonakala ngathi luyaqhubeka okomzuzwana.
Imeko yentengiso yakutshanje njengoko inokubonwa kwiYen yaseJapan kunye nexabiso legolide kwiyure zokuqala namhlanje ibonisa ukuba ukuphakama kwenkxalabo malunga negridlock kwiintetho zorhwebo kunokuba kungafuneki.
Ukuncipha okuncinci okufunyanwa yi-AUD, i-NZD xa ithelekiswa ne-USD ngababini nako kuyangqinelana nokuba iingxaki eziphakamileyo zisenokufika kwangoko.
Kwakhona ukunyaniseka kweengxelo ezithe zafika malunga negridi yesivumelwano kwintengiso kuyathandabuza njengoko imithombo ihlala ingaziwa. Umrhwebi waseShanghai uthe ezo ngxelo ziyaziphazamisa ngelixa ubhekisa kwinto yokuba intetho zentetho zorhwebo zihlala zinjalo. Uye wakhankanya nomoya wokungaqiniseki okujikeleza kwimarike kubangele ukurhuqa kurhwebo.
tags Dollar yaseAustralia, NZD, Intengiso yase-US-China yoRhwebo
Umkhwa weBullish kwiYen njengokungaqiniseki ngeeNtengiso zeNtengiso yeMask, i-NZD ephezulu, i-AUD Phantsi
Ukuhlaziywa: 17 Novemba 2019
Imfazwe yorhwebo ebihleli ngaphezulu kweenyanga ezili-16 phakathi kwe-US ne-China ikhuthaze umbono omncinci wokuzithemba kwiiveki ezidlulileyo xa iingxelo zihluziwe kuwo omabini la mazwe malunga nokususa irhafu ebethwe kwimpahla yabo.
Kolu khanyiso, kwabonakala ngathi abatyali zimali bekhululekile ekuthatheni umngcipheko, ngaloo ndlela bejongela phantsi imali ekhuselekileyo, iJapan Yen kunye nedola yaseSwitzerland.
Ngaphezulu kweeveki ezintlanu, ubuhle babonakala bujikeleze idola yaseMelika kwaye benyuka ngebhasikithi yezemali.
Iziganeko zithathe ukujika xa i-US ityhila ukuba ayizukususa amaxabiso athile, oko ke kubangele ukungaqiniseki njengoko abatyali-mali bengaqinisekanga ukuba isivumelwano sasiza kusayinwa nini.
Abatyalomali bafuna induduzo kwiiMali eziKhuselekileyo
Abatyalomali ke ngoko bakhuthazwa ukuba bathathe intuthuzelo kwimali ekhuselekileyo, i-yen yaseJapan njengoko iphakama ngokuchasene neveki ephelileyo ye-108.785 xa kuthelekiswa nedola.
I-yen ikwabonakala ngathi ixhaswe zizidubedube zase-Hongkong kunye nezoqoqosho ezingathandekiyo ezivela kwi-Eurozone nase China.
Kwiveki ephelileyo, izibalo zoqoqosho zikhutshiwe yabona i-China irekhoda imveliso esezantsi kwezorhwebo, amanani e-GDP asezantsi eJapan naseJamani ngelixa amanani engqesho e-Australia ehlehla kufutshane ne-19,000 ngokuchasene nokunyuka okuqikelelweyo, elilelona likhulu liye larekhodwa ukusukela ngo-2016. Isivuno sebhondi sikarhulumente esihamba ngaphezulu kweminyaka elishumi ukurekhoda iveki isezantsi.
I-Aussie ivale iveki ephelileyo nge-0 .6821 xa ithelekiswa nedola, imi kwi-negative ye-0.56%. Uqikelelo lokuba ibhanki egciniweyo yase-Australia inokuqalisa ukunciphisa inzala ngenxa yeenkcukacha-manani zengqesho nayo ijongele phantsi i-AUD.
Kwelinye icala, i-NZD yafumana iboss njengoko ibhanki yolondolozo yaseNew Zealand ibambe inzala yayo ngepesenti. Abahlalutyi babeqikelele ukuncitshiswa kwe-OCR (ireyithi yemali esemthethweni).
I-NZD ivale iveki ephelileyo nge-0.6402 xa kuthelekiswa nedola ngenzuzo yentengiso ye-1.19%. Isimo se-RBNZ sothusa abatyali mali njengoko ibhanki ephezulu ngoku ibonise umbono okhulayo wokukhula. Ukuthelekiswa kuphezulu kwinqanaba lenzala elinokuthi lisikwe ngoFebruwari okanye ngoMeyi. I-RBNZ ikwakhankanyile ukuba inokupompa ukungabinamali ngakumbi kuqoqosho ukuba kukho imfuneko.
tags Dollar yaseAustralia, Yen Japanese, IDola yaseNew Zealand, Iimfazwe zoRhwebo zase-US-China